Wararkii ugu dambeeyay khilaafka Xisbiyada Axmaarada iyo Ezema - Ogaden24 | Ogaden24
May 18, 2021 - Comments off
Maalmihii u dambeeyay waxay ka dhex tafantay Axmaradii iyo Xisbiga Ezema, shacabka & xisbiyada mucaradka ah ee Axmarada ayaa ka biyo diidsan siyaasada Birhanu Nega oo ah guddomiyaha xisbiga Ezema.Maalintii shalayna Birhanu Negga oo Deeganka Axmarada shir ku qaban rabbay ayay hayaddaha amnigu baajiyeen, kaddib markii ay shacabka Woldiya ee Axmaradu ku gadoodeen, islamarkaana amniga Birhanu loo cabsaday.
Axmarada ayaa Birhanu ku haysata labba arrimood;
1) Birhanu oo maalin hore Deegamka Benishangul dadka ku barakacayay ka hadlayay ayaa Axmarada ku tilmaamay kuwo halkaas soo degay oo marti ku ah (soo galayti). Arrintan waxay keentay in xubnaha mucaradka ee Axmarada iyo xisbiga Aben ee garabka fog shacabka ku kiciyaan.
2) Birhanu Nega oo xili hore ka hadlay Deeganka Oromada oo ay musharixintooda caddaadis soo foodsaray, islamarkaana loo diiday ayaa yidhi “Maxaa nalagu haystaa, waxaan soo sharaxnay dad Oromo ah”, Deegankan oo ah midka kaliya ee caddaadis ka haysto, ayaa musharaxintoda qaar lagu dilay. Arrintan ayay Axmaradu kasoo horjeedsadeen, waxayna leeyihiin muxuu kaga duwan yahay xisbiyada kale ee qowmiga ku dhisan? Waxay ku doodayaan innuu xaqiray malayin Axmaro ah oo Deegankaas ku dhex noola.
Axmaradu waxay kaloy ku diidan yihin Xisbiga Ezema, maadama dadkii u badnaa ee Axmaradu waddan jirtay uu kala wareegay, qowmiyadaha Dabuubka, gaar ahaan Guragada oo Axmarada la jiibin jirtay in hanaanka Federalisamka laga gudbo, ayuu kala hoos baxay. Waxayna wiiqaysaa awoodii iyo taageradii xisbiyada Axmarada oo ku koobantay kaligood.
Dhacdadan waxaan usoo qaatay innaan wax ka barano, islamarkaana dadkeenu noqdaan kuwo xisbiyada mucaradka iyo Barwaaqaba la xisaabtami kara haddii lagu xad gudbo arrimaha masiriiga ah.
Tusaale waxaa idiin ku filan in Deeganka Soomalida xubno qowmiyado kale ah xisbigani soo sharaxay, mana arkaysid cid kahor timid oo diiday, Deeganada qaarkood waxay diideen in uu soo sharaxo xubno iyaga kasoo jeeda, waxayna leeyihiin xubin anaga ah oo laydinku daray waxba sheegi mahayee, xisbiga qorshahiisa aan qayb ka noqono, oo ka tanaasula arragtida aad wadataan.